Tag: ndị na -emetụta instagram | Martech Zone
Tag: ndị na -emetụta instagram
Ngwa 8 maka nyocha ahịa azụmaahịa metụtara mmetụta dị na niche gị
Wednesday, June 22, 2022 Wednesday, June 29, 2022 Ọ bụ Elizabeth Shydlovich
Ụwa na-agbanwe mgbe niile na ahịa na-agbanwe na ya. Maka ndị na-ere ahịa, mmepe a bụ mkpụrụ ego dị n'akụkụ abụọ. N'otu aka, ọ bụ ihe na-atọ ụtọ ka ị na-aga n'ihu na-agbaso usoro ịzụ ahịa ma na-ebute echiche ọhụrụ. N'aka nke ọzọ, dị ka ọtụtụ ebe nke ahịa na-ebilite, ndị na-ere ahịa na-emewanyewanyewanye - anyị kwesịrị ijikwa usoro ahịa ahịa, ọdịnaya, SEO, akwụkwọ akụkọ, mgbasa ozi mgbasa ozi, na-ebupụta mkpọsa okike, na ihe ndị ọzọ. Ọ dabara nke ọma, anyị nwere ahịa
Shoutcart: Ụzọ dị mfe iji zụta mkpu n'aka ndị na-emetụta mgbasa ozi ọha
Tọzdee, Disemba 28, 2021 Tọzdee, Disemba 28, 2021 Douglas Karr
Ọwa dijitalụ na-aga n'ihu na-eto ngwa ngwa, ihe ịma aka nye ndị na-ere ahịa n'ebe niile ka ha na-ekpebi ihe ha ga-akwalite na ebe ha ga-akwalite ngwaahịa na ọrụ ha n'ịntanetị. Ka ị na-achọ iru ndị na-ege ntị ọhụrụ, enwere ọwa dijitalụ ọdịnala dị ka mbipụta ụlọ ọrụ na nsonaazụ ọchụchọ… mana enwerekwa ndị na-eme ihe. Ahịa ndị na-emetụta mmetụta na-aga n'ihu na-eto eto na ewu ewu n'ihi na ndị na-eme ihe ejiriwo nlezianya tolite ma chịkọta ndị na-ege ha ntị na ndị na-eso ụzọ ha ka oge na-aga. Ndị na-ege ha ntị nwere
HypeAuditor: Stack Marketing Influencer gị maka Instagram, YouTube, TikTok ma ọ bụ Twitch
Wednesday, September 29, 2021 Wednesday, September 29, 2021 Douglas Karr
N'ime afọ ole na ole gara aga, agbagogoro m mkpakọrịta na ndị na -emetụta ahịa. M na -ahọrọ nke ọma n'ịrụ ọrụ na ụdị - na -ahụ na aha ọma m wuru agaghị emerụ mgbe m na -atụ anya atụmanya na otu m ga -esi nwee ike inye aka. Ndị na -emetụta ihe na -enwe mmetụta naanị n'ihi na ha nwere ndị na -ege ntị tụkwasịrị obi, na -ege ntị ma na -eme akụkọ ma ọ bụ ndụmọdụ ha na -ekerịta. Malite ire ere ma ị ga -efu